Xildhibaan Mahad Salaad oo fariin culus u diray Madaxweyne Xaaf – Hornafrik Media Network
MADASHA HORNAFRIKSomali NewsTOOSHKA HORNAFRIK
Xildhibaan Mahad Maxamed Salaad oo ka tirsan golaha shacabka Soomaaliya ayaa ka hadlay soo rogaal celinta Madaxweynaha Galmudug, Mudane Axmed Ducaale Geelle Xaaf ee ku aadan arrimaha doorashada maamulkaasi.
Mahad Salaad oo qoraal soo dhigay bartiisa Facebook-ga ayaa marka hore sheegay in intaan ka badan Galmudug aysan u dul qaadan karin ila meerayso lagu danaysanayo.
Sidoo kale wuxuu su’aal ka keenay waxa isku soo beegay imaanshaha Madaxweyne Xaaf magaalada Gaalkacyo, guddiga xalay saqdii dhaxe uu magacaabay, kadib markii xil kiisii uu ku wareejiyay wasaarada arrimaha gudaha Soomaaliya iyo waraaqda ka soo baxday xaafiiska Hantidhowrka guud ee Qaranka ee looga hakiyay lacagtii Galmudug.
Xildhibaanka ayaa sidoo kale intaasi ku daray mar haddii uu awooddiisii ku wareejiyey wasaaradda arrimaha gudaha ay u dhiganto inuu is casilay, sida uu hadalka u dhigay.
Ugu dambeyn wuuxu kula taliyey Madaxweyne Xaaf, haddii uu weli hami uga jiro Galmudug inuu markale isku taago, tartanka doorashadana uu ka qeyb galo.
GALMUDUG ila meerayso lagu danaysanayo intaan ka badan uma dulqaadan karto!
Wiil Waal ayaa hada kahor gabar la dhalatay shirqool u dhigtay. Marka waxaa lagula balamay markii ay aragto isaga oo dagan in ay kor u sheegto eray afgarasho ah si gaadmo loogu dilo. Kadibna inta ku fahmay gabadhii afgarashadii ay bixisay ayuu qalabkiisii dagaalka degdeg dhulka inta uga haabtay ku yiri gabadhii NAAYAA MAXAA DIBIGA NAASA ADAG IYO WEEDHA KULMIYAY!
Haddaba, waxaa in la iswaydiiyo mudan waxa isku soo beegay imaanshaha Madaxweyne Xaaf magaalada Gaalkacyo, Guddiga xalay saqdii dhaxe uu magacaabay iyo laxowga cusub ee Galmudug ka soo galay 6 bilood kadib markii xilkiisii uu ku wareejiyay Wasaarada Arimaha Gudaha iyo waraaqda ka soo baxday Xaafiiska Hantidhowrka Guud ee Qaranka ee looga hakiyay lacagtii Galmudug ee dhowrkii bilood ee la soo dhaafay sida shaqsiga ah ay u isticmaalayeen isaga iyo saaxiibadiis?
Madaxweyne Xaaf markii uu ku wareejiyay Wasaarada Arimaha Gudaha xilkii reer Galmudug ay u dhiibteen ayuu ka tanaasulay mas’uuliyadii uu Galmudug u hayay. Xilka laguu doortana waa dhiibay in aad dhahdo waxay la mid tahay adiga oo iska casilay. Marka Galmudug mas’uuliyad hadda uma haysid ee hadii han siyaasadeed kaaga jiro tartanka soo gal abtiyow.
Xanuun aan la garan oo dad ku soo ritay deegaan ka tirsan G/Sool
Kenya, Somalia keep eyes on court over ocean block dispute, East Africa